Mihamafy ny krizy ara-politika ao Venezoela ary mitombo ny sivana antserasera · Global Voices teny Malagasy
Nanamontsana zavabita vaovao teo amin'ny sivana tao aminy i Venezoelà
Voadika ny 06 Mey 2019 6:02 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Shqip, Ελληνικά, Română , Italiano, Français, Esperanto , English
Nampita ny hafany tamin'ny lahatsary nozaraina tao amin'ny Twitter i Guaidó, izay ahitana azy mijoro eo anoloan'ny vondrona miaramila manao fanamiana. Mijoro eny amin'ny farany aoriana kosa ny lehiben'ny mpanohitra Leopoldo López, mpanolotsaina ara-politikan'i Guaidó. Tsy ela dia nidina an-dalambe ireo mpanohana azy ireo tamin'ny 30 Aprily ary niverina indray tamin'ny 1 Mey.
Ny 23 Janoary 2019, nanonona ny Andininy faha-233 tamin'ny Lalàmpanorenana Venezoeliana i Guaidó, filohan'ny Antenimieram-pirenena mba handray ny fahefan'ny filoha ary mangataka fifidianana. Niampanga ny governemantan'i Nicolás Maduro ho tsy ara-drariny ny Antenimieram-pirenena taorian'ny nanokanana azy ho amin'ny fe-potoam-piasana faharoa, taorian'ny fifidianana ny volana mey 2018 izay heverin'ny maro fa feno hosoka.
Ny “Hetsika Fanafahana” dia natao ho voalohany amin'ny drafitra mizara telo natolotr'i Guaidó tamin'ny volana Janoary 2019. Nanjary “mantra”-any amin'ny maha-mpitarika politika izany: “mamarana ny fisandohana, [manangana] governemanta tetezamita, ary [manatontosa] fifidianana malalaka”.
Tamin'ny volana febroary 2019, mbola nankasitraka an'i Maduro ho filohan'i Venezoela ny Firenena Mikambana, saingy firenena 65 no nankatoa an'i Guaidó ho filoha vonjimaika.
Namaritra ny sasany tamin'ireo hetsika tamin'ny 30 Aprily ny Caracas Chronicles, media iombonana:
Nanohitra ny baomba mandatsa-dranomaso tao Altamira sy toerana maro hafa manerana ny firenena ireo mpanao fihetsiketsehana hiringiriny manohitra ny fitondrana. Naratra tamin'ny alalan'ny tifi-basy ny sasany. Toa tezitra ireo mpanao fihetsiketsehana ary naniry mafy hijoro hatramin'ny farany. Tena nahavariana, satria nankasitraka ireo manamboninahitra GNB izay nijoro niaro azy ireo manoloana ny mpitandro ny filaminan'ny fitondrana ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanjary niparitaka be ny lahatsary misy fiara mifono vy “Chavista” mamelively mpanao fihetsiketsehana eo akaikin'ny toby an'habakabaka La Carlota.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpikaroka momba ny sivana, Andrés Azpúrua, nametraka “zavabita vaovao amin'ny sivana” ho an'ny tenany i Venezoelà tamin'ny 30 Aprily sy 1 Mey, satria sampandraharaha momba ny serasera sy fantsom-pahitalavitra maromaro no lasa tsy azo nidirana tao amin'ny firenena, manamafy ny famerana ny tontolon'ny haino aman-jery efa voafetra mafy ao amin'ny firenena.
Nitatitra ny vondrona mpikaroka momba sivana amin'ny aterineto, NetBlocks fa naverina tamin'ny laoniny ny tolotra 20 minitra talohan'ny kabarin'i Nicolás Maduro tamin'ny volana Mey